Warkii.com-News and information about Somalia Yaa gadaal ka riixaya Doorashada Madaxweyne ee la shaaciyay in Cadaado ka dhaceyso ? - Warkii.com-News and information about Somalia
Yaa gadaal ka riixaya Doorashada Madaxweyne ee la shaaciyay in Cadaado ka dhaceyso ?
Xildhibaano sheegay in dhawaan xilka ka qaadeen Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaale Xaaf ayaa shalay qoraal ay soo saareen ku shaaciyay xiliga la qabanayo doorashada Madaxweynaha maamulkaasi.
Dad badan ayaa rumeysan in aysan Cadaado doorasho Madaxweyne oo xalaal ah ka dhaceyn waqtiga xubnahan Mucaaradsan Xaaf Shaaciyeen oo ah 25-ka bishan October, waxaana adag in Madaxwene Xaaf ogolaado in Cadaado lagu qabto wax doorasho ah.
Xildhibaanada sheegay in Xilka ka qaadeen Xaaf sidoo kale dooranaya Madaxweyne Cusub waxaa gadaal ka taagan oo dhaqaalo badana ku bixinaya nin lagu Magacaabo Cali Shariif oo damac weyn uga jiro in si sahlan ugu fadhiisto Kursiga Xaaf.
Cali Shariif ayaa dhaqaalo aad u badan la tagay magaalada Cadaado si uu ugu bur buriyo nidaamka hada jira kadibna isaga loogu doorto Madaxweyne, waxaana ninkan horey ugu fashilmay in Madaxweyne ka noqdo Galmudug doorashadii uu Xaaf la galay.
Xildhibaanada kasoo horjeeda Xaaf ayaa doonaya in Doorasho mala awaal ah ku qabtaan Hotel kuyaala magaalada Cadaado si ay dhaqaalo uga qaataan Cali Shariif kuna dhawaaqaan in isaga u doorteen Madaxweyne.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Xaaf ayaa hada taageero ka helaya maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira, waxa uuna Xaaf hada kalsooni ku qabaa in uu xoog kusii joogo kursiga Madaxweynaha Galmudug .
Maamulka Galmudug ayaa qarka u saaran in uu noqdo maamul magac u yaal ah oon wax talo iyo tusaale aan laheyn, waxaana wali xabsi guri ku jira Madaxweyne kuxigeenka Galmudug iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa ka gaabsatay ka hadalka xiisada Siyaasadeed ee Galmudug ka taagan, waxaana adkaan doonta in si fudud lagu aqoonsado hadii Xildhibaanada Cadaado jooga doortaan Madaxweyne kale uu Galmudug yeesho.